Maxay Ahayd Sababtii Dhabta Ahayd Ee Aanu Daniel Sturridge Ugu Dabaal Degin Goolkiisii Layaabka Lahaa Ee Kulankii Stamford Bridge? Isaga Ayaa Sharaxaad Ka Bixiyay. - GOOL24.NET
Maxay Ahayd Sababtii Dhabta Ahayd Ee Aanu Daniel Sturridge Ugu Dabaal Degin Goolkiisii Layaabka Lahaa Ee Kulankii Stamford Bridge? Isaga Ayaa Sharaxaad Ka Bixiyay.
September 30, 2018 Mahamoud Batalaale
Daniel Sturridge ayaa xalay kooxdiisa Liverpool ka badbaadiyay guuldaradii ugu horaysay ee Premier league ku soo gaadhi lahayd isaga oo afar daqiiqo oo kaliya ku sameeyay saamayn cajiib ah isla markaana Blues ka horjoogsaday guul dahabi ahayd oo ay ka gaadhayeen Liverpool.
Gool dhaliye kasta oo daqiiqada 90 aad ama waqtiga la midka ah gool dhaliyaa waxa uu sameeyaa dabaal deg waali ah, waxaana xaalad waali ah gala jamaahiirta iyo kooxda goolka waqtigan oo kale loo dhaliyo waana wixii ay sameeyeen ciyaartoyda, jamaahiirta iyo shaqaalaha tababarka kooxda Liverpool markii uu Sturridge ka yaabsaday goolhaye Kepa.
Laakiin Daniel Sturridge ayaan wax dabaal deg ah samayn wuxuuna sharaxaad ka bixiyay sababta dhabta ah ee ka danbaysay in aanu si waali ah ugu dabaal degi goolkii quruxda badnaa iyo waliba waqtigii xaasaasiga ahayd ee uu dhaliyay.
Waxaa suurtogal ah in dad badani iskugu jawaabi karaan Sturridge waxa uu ka soo ciyaaray Chelsea sababtaas awgeedna in aanu dabaal degin, balse hore ayuu Chelsea gool uga dhaliyay isla markaana uu si waali ah u dabaal degay balse waxa uu Sturridge sheegay in wiil ay ilmaadeer yihiin uu hore dhaliil ugu soo jeediyay dabaal degii uu ka sameyey gool uu hore Chelsea uga dhaliyay kaas oo taageere u ah kooxda Blues.
Sturridge oo ka hadlaya sababta uu u badalay dabaal degii uu hore ugu sameeyay gool uu Chelsea ka dhaliyay ayaa yidhi: “Wanaag ayaan dareemay. Inaadeerkay ayaa aniga igu dhegay maalintii kale ee kulankii Chelsea aan dabaal degay, sababtoo ah isagu waa taageere Chelsea ah. Waxaan filayaa in waqtigii la midka ahaa ee maalintii kale aan farxay oo aan dabaal degay”.
Sturridge oo sababta labaad ku sheegay ixtiraam uu Chelsea u hayo ayaa yidhi: “Xaqiiqdii anigu kooxdan ayaan u soo ciyaaray waxna waan ku soo gaadhay waxaanan ixtiraam u hayaa ciyaartoyda, shaqaalaha iyo wax walba, sidaa daraadeed maanta maan doonayn in aan dabaal dego”.
Daniel Sturridge ayaa xili ciyaareedkan muujinaya awood badan markaasta oo uu waqti ka helo kooxda Klopp isaga oo xataa kulamadii xili ciyaareedka ka horeeyay si buuxda isku muujiyay waxaana la filayaa in uu dib u helayo kalsoonida macalinkiisa Jurgen Klopp.